Ny Apple Watch dia maharitra iray minitra hanombohana | Avy amin'ny mac aho
Minitra iray dia ny fotoana ilain'ny Apple Watch hanombohana avy amin'ny fanjakana mihidy
Iray andro latsaka talohan'ny namenoana ny tambajotram-pifandraisana sary, sary nipoaka sy horonan-tsary an'arivony amin'ireo mpampiasa an'arivony izay hanana ny Apple Watch, Tombananay fa efa mivezivezy amin'ny tambajotra izy io fa ny fotoana laniny hanombohana ny fiambenana Apple vaovao dia iray minitra mahery.
Fantatsika fa manizingizina be amin'ity fitaovana ity izahay, saingy amin'izao fotoana izao, olona an'arivony maro no tsy manao afa-tsy ny mangataka karazana fampahalalana rehetra momba izany. Miadana hilamina ny olana ary ho vokatra iray hafa natombok'i Cupertino io.
Betsaka ny fampahalalana miely amin'ny Internet momba ity famantaranandro vaovao ity, fa amin'ity lahatsoratra ity izahay dia hilaza zavatra izay mety mbola tsy novakianao. Ny tena izy dia nisy video navoaka izay ahitanao ny fanombohana voalohany ny Apple Watch. Maharitra 70 segondra izy io, mahatsiaro ho tafahoatra.
Na izany aza, raha raisintsika ho miambina ity fitaovana ity dia miresaka aho a Gadget fa tokony hijanona eo foana izany ary tsy tokony hovonoina mandritra ny andro. Izany no antony, na iza na iza maka mihoatra ny iray minitra hanombohana, tsy ho teboka ratsy mihitsy izany.
Ho hitantsika raha manomboka rahampitso ity fihetsika ity na naverin'i Apple fanavaozana ny rafitr'io izay mampihena ireo fotoana ireo. Fantatsika rehetra fa io no andiany voalohany amin'ny fitaovana vaovao ary izao dia tonga ny fotoana hanadiovana ny famoahana kinova vaovao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple Watch » Minitra iray dia ny fotoana ilain'ny Apple Watch hanombohana avy amin'ny fanjakana mihidy
Magzter, ilay "netflix" an'ny magazine amin'ny iPad-nao
Apple dia manavao ny fizarana Apple Watch miaraka amin'ny Action, Apple Pay ary Training miaraka amin'ny horonan-tsary telo